लिं*गको आकार कत्रो भए महि*लालाई शा*रीरिक याै*न स*म्पर्क गर्दा आ*नन्द मिल्छ - Sawal Nepal
२०७७ जेष्ठ १६, १०:०९
लिंगको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? यौन सन्तुष्टिका लागि लिंगको सही आकार कति हो ? यस प्रकारको सोच प्रायः सबै पुरुषको दिमागमा आइरहन्छ, तर अब यसको उत्तर पनि प्राप्त भएको छ।वैज्ञानिकहरूले यौ’न सन्तुष्टिका लागि लिंगको आकार कत्रो आकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् ।युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरूको एक टिमले हालै एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, जसमा १८ देखि ६५ वर्षका ७५ जना महिला सहभागी थिए । ऊक्त सर्वेक्षणका त्रममा महिलाहरूलाई लिंगका फरक–फरक साइजका कृतिम लिंग देखाइएको थियो ।
यो अनुसन्धानबाट आएको परीणाम देखेर वैज्ञानिकहरू पनि अचम्भित भएका छन् ।परिणामअनुसार यौ’न सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले ६ दशमलव ३ इन्चको आकारलाई सही बताए । यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले ६ दशमलव ३ इन्चको लिंगलाइ उपयुक्त मानेका छन् ।कसैको लिंगको आकार ६ दशमलव ३ वा ६ दशमलव ४ नभए पनि आत्तिनु भने पर्दैन । किन भने लिंगको औसत आकार ५ दशमलव २ इन्च हुन्छ । उक्त अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने महिलाहरू यौ’नका लागि लिंगको आकारलाई मात्र महत्व दिँदैनन् । यद्यपि क्याजुअल सेक्सको समयमा भने उनीहरू लिंगको आकारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउँछन् ।
के तपाई पहिलो पटक यौ’न सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ ?- पहिलो पटक याै’न सम्पर्क गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ९ महत्वपूर्ण कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् । अध्ययन गर्नु होला याै’न जिज्ञासासँगै मानिसहरु यसको बारेमा थाहा पाउन पनि आतुर हुने गर्दछन् र मानिसहरुले धेरै प्रकारको ग’लत जानकारी पनि दिने गर्दछन् ।यस्तै कौतुहललाई समाप्त गर्नका लागि पहिलो पटकको सेक्सको बारेमा हामी केहि जान्कारी दिन्छौँ । बा पहिलो पटकको यौ’न सम्पर्ककारेमा मानिसहरुमा धेरै प्रकारको कौतुहल र जिज्ञासा उत्पन्न हुने गर्दछ ।
१– यदि पहिलोपटक से’क्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चरमोत्कर्षको आशा नराख्नुहोस् । यतिबेला एक अर्काको शारिरिक आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र लिनुहोस । २– यदि तपाईं आफ्नो पहिलो से’क्स धेरै राम्रो हुने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो तपाईंको लागि नयाँ अनुभव हो र यसका लागि तपाईं धैर्यवान् हुन जरुरी छ । तपाईंको पहिलो सेक्स अनुभव राम्रो नभएपनि यसमा डराउनु र आत्तिनुपर्ने छैैन किनभने यो समयसँगै राम्रो हुँदै जान्छ ।
३– महिलाहरुले पहिलो पटक से’क्स गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख्नका लागि झु’टो चरमोत्कर्षको कुरा गर्नुपर्दैन । यो तपाईंको पहिलो पटकको से’क्स भएका कारण तपाईंको पार्टरले तपाईंलाई बुझ्नुहुनेछ । ४– महिलाहरु माया दर्साउन लजाउने गर्दछन् । तर पहिलो पटक से’क्स गर्दा तपाईं पहल गर्नुहोस र उनलाई पर्खेर नबस्नुहोस् । यदि एक अर्काको मुख ताकेर बस्नुभयो भने पुरा रात नै बित्छ । ५– धेरैजसो मानिसहरु पहिलो पटकको से’क्स गर्नुपूर्व फोहोरी गफ गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् तर यो सत्य होइन् । पहिलो पटकको लभ मेकिङको दौरानआफ्नो पार्टनरसँग तपाईं के चाहनुहुन्छभन्ने बारेमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ ।
६– विश्वास गर्नुहोस् से’क्समा आकारको कुनै पनि भूमिका हुँदैन । महिलाहरुमा धेरैजसो यो भ्रम हुन्छ कि उनको पुरुषको आकार जति ठूलो हुन्छ त्यति नै उनीहरुहरु आनन्दित हुने सोच्दछन् तर यो सोचाई गलत हो । चरमोत्कर्षमा आकारको कुनै पनि महत्व हुँदैन । ७– पहिलो पटकको से’क्स पीडादायक हुन्छः पहिलो पटकको से’क्स निकै पी’डादायक हुने धेरै मानिसहरुको भनाई हुन्छ तर यदि ठिक तरिकाले फोरप्ले गरियो र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो पटकको से’क्स निकै सजिलो र कम पीडादायी हुन्छ ।
८–यदि तपाईं पो’र्न ‘स्टारजस्तो से’क्स गर्ने सोच्दैहुनुहुन्छ भने यो तपाईंको सोचाई ग’लत साबित हुनेछ । पोर्न फिल्ममा देखाइने धेरैजसो झुटो हुने भएकाले यसको पछि नलाग्नुहोस् । ९– पहिलो पटकको से’क्स धेरै लामोसम्म हुने कुरा गलत हो । त्यसकारण पहिलो पटकको से’क्समा कुनै उद्देश्य नराखी मात्र आनन्द लिने तरिकाले गर्नुहोला ।
नियमित यौ’न स’म्बन्धले महिलाका यी ‘समस्या’ सुधार !